Industrial Scrap Okuqhubekayo iTire Pyrolysis Izinsiza kusebenza - China NIutech Imvelo
Industrial Scrap Okuqhubekayo iTire Pyrolysis Izinsiza kusebenza
Scrap iTire Pyrolysis imishini yokukhiqiza Process
Isondo Scrap is imibengo ku efanele isondo chips futhi ngokuqhubekayo bondliwe zibe ophendulayo ngoba ingcindezi evamile lokushisa ongaphakeme pyrolysis kanye ongaphakeme lokushisa sulphur ukudluliswa kulethe ngedivayisi ashisayo uphawu.
Le gesi uwoyela pyrolyst baguqulelwa uwoyela fuel futhi kancane igesi ezivuthayo (kabusha ukusetshenziswa emva ekhuhla) emva zihlukaniswa futhi iyapholisa ngokusebenzisa uwoyela isihlukanisi.
Okuphuma okuqinile carbon eluhlaza omnyama steel ngeke ahlukaniswe isihlukanisi kazibuthe. Okuluhlaza carbon omnyama uzobe ngokuzenzakalelayo idluliselwe carbon black uhlelo zokukhiqiza kanye grade zezimboni carbon black izotholwa emva ezibucayi izinqubo like Milling njll noma uzothola ezinye izinhlobo ephezulu ukubaluleka chemical impahla. I steel ahlukaniswe wayengathengiswa njengoba Scrap steel.
Le gesi ezivuthayo lizobhujiswa liphele esetshenziswa njengoba uphethiloli ohlelweni emva inqubo ekhuhla. Uhlelo Ukushisa ubamukela asalile ukushisa kabusha ubuchwepheshe, okuyinto kude ulondoloza amandla ukusetshenziswa kanye ongaphakeme phansi izindleko ukugijima. Le gesi ezivezwa umugqa ukukhiqizwa uzobe nahlanza ukuhlangabezana ejwayelekile kwemvelo ke esibhedlela.
Ukukhiqizwa umugqa izinhlelo
Industrial okuqhubekayo, throughput omkhulu, ukuthuthukisa ukuphathwa kahle futhi ukukhiqizwa khono.
Amanani aphansi lokushisa pyrolysis ubuchwepheshe, ukusetshenziswa ongaphakeme, ukuthuthukisa uwoyela isivuno kanye nekhwalithi, ukuqinisekisa eside, operation okuqhubekayo futhi izinze zokukhiqiza, kakhulu ukwandisa imishini * sempilo.
Amanani anti-cocking, ezishisayo ukusatshalaliswa ubuchwepheshe, unike amandla impahla ukufuthelana ngokulinganayo futhi? Pyrolized ngokuphelele, azuzwe izinga okusezingeni umkhiqizo.
Kuphela ashisayo uphawu ubuchwepheshe, ukuqinisekisa ukusebenza ephephile futhi eqotho.
Exclusive igesi uhlanzekile futhi asele ukushisa kabusha ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe, igesi nahlanza ingasetshenziswa bafudumale system njengoba igesi ezivuthayo, ukushisa asele kungenziwa Dully asetshenziswe, waqaphela self-asinikeza pyrolysis ukusabela ngaphandle extra Ukushisa umthombo, kakhulu ukunciphisa izindleko egijima.
Exhaust igesi komugqa ukukhiqizwa ihlolwe, zonke ipharamitha ekushayweni bahlangabezane nemfuneko EU EEA EU ne-US Epa.
Lonke umugqa ukukhiqizwa zamukele PLC control ezihlakaniphile, isixwayiso, alamu bese kokulungisa okuzenzakalelayo umsebenzi, ukuthathelwa umshuwalense ukusebenza ngaphansi isimo nokuphepha.
imfuneko okuphansi ukuze Manpower, okuphansi zokusebenza umfutho kanye ukukhiqizwa ahlanzekile.
Previous: Amafutha uhlelo ziphuzo zazihluzwa Kuhle High-Quanlity Imikhiqizo
Okulandelayo: imfucuza plastic kabusha kulahlwa Kuhle High-Quanlity eshibhile Imikhiqizo
Scrap isondo pyrolysis kulahlwa
imfucuza isondo pyrolysis kulahlwa
imfucuza isondo pyrolysis umshini
Scrap Okuqhubekayo iTire Pyrolysis System
High Inzuzo Ukusingathwa iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Plant
Hot Okuthengisa Amafutha Pyrolysis Refining Machine
Pyrolysis Amafutha Izinsiza kusebenza
Pyrolysis Plant Plastic Ukusingathwa
Rubber Icubungula Line
Scrap iTire Pyrolysis System
Scrap iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Machine
Scrap iTire Pyrolysis Imishini
Tech Ukusingathwa iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Plant
ITire Amafutha Pyrolysis
iTire Pyrolysis Amafutha Plant
ITire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Machines Ukuze Oil
iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Plant Ukuze Amafutha
Used iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Pyrolysis Machine
Waste Plastic Refining Ukuze Amafutha
Ukusingathwa Scrap Plastic iTire Pyrolysis
Ukusingathwa iTire Recycle Ukuze Amafutha
Ukusingathwa iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Ukuze Amafutha Machine
Ukusingathwa iTire nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile Machine Ukuze Oil
Ukusingathwa iTire Refining Ukuze Amafutha
Ukusingathwa iTire Ukuze Udizili Plant
Ukusingathwa Tyres Ukuze Okokhelekayo Recycle
High Amafutha lokukhipha Ukusingathwa Okuqhubekayo eTire fuel O ...